In badan 8 kun oo muwaadiniin oo aykooxda argagaxisada ee “onag shane” hantidoodii ay ka gubeen ayaa sheegay inay dhibaato ku suganyihiin - ዜና ከምንጩ
Gobolka Waqooyiga Shoa,ee dagmada wara jaarso ee deegaanka oromiya ayay shacab ku dhaqan oo kabadan 8 kun oo muwadiniin ah 256 guryood in ay ka gubeen kooxda onag shane islamarkana aysan haysanin wax caawimaad ah ayay u sheegeen wargayska addis maalada.
Wargayska addis maalada dadka goobtaas ku nool sida ay ka soo xaqiijisay, dadkan guryhooda laga gubay ee tira ahaan ka badan 8 kun oo muwadiniin ah inay ka soo qaxeen guryahood bishii tikimt 17/2014 laga soo bilaabo dawlada iyo haayadaha samafalka in aysan wax caawimaad ah iyo meel ay dagaan inaysan ka helin oo ay dhibaataysanyihiin ayay sheegeen.
Mid ka mid ah dadka aagaasi ku nool oo lagu magacaabo tasfaaye nuguse,ayaa sheegay in gurigiisii laga gubay oo asaga iyo 7 ka mid ah qooyskiisa in aysan haysanin meel ay dagaan ama ay harsadaan.mudane tasfaae ayaa yiri in dawlada aysan ka helin wax caawimaad ah alaabtii ay haysteena guriga lagu dhax gubay sidaas daraadeed cunta la’aan iyo hooy la’aan inay yihiin.
Shaqsigan ayaa intaasi ku daray,in qooyskiisa cunt ahaan ay u quutaan waxyaabaha duurka laga soo goosto,guri la’aan maadaama ay yihiina ay ilaa mudo saddax todobaad ay dhax seexanayeen ayay addis maaalada usheegeen.
Shaqsiga kale ee shegtay isla dhibkaas inuu qabo oo lagu magacaago daanye balaay.wuxuuna sharaxaya shaqsigan dagmada qabaleega hoos yimaada ee la dhaho ‘’fine era’’ 256 qooys guryahooda ayaa lagu bay. Laba boolis ayaa yimid kadibna way laabteen moyaane,xiligaas kadib wax noo yimid ma jirin oo xaaladeena naga waraystay.
Shaqsiga wuxuu intaas ku daray, ilaa iyo hada guryihii lagubay in badalkooda gurya kale in la dhiso ay adkaatay, odayaasha aan awooda lahayn halkan ayay iskaga hareen oo dambaskii guryahooda ayay ku dulnoolyihiin oo waxay taaganyihiin halkan hanagu dilaan kooxda argagaxisada meelna uma socono.
Kooxdan ay golaha wakiilada shacabka ay ku dareen liixda argagaxisade ee onag shane xiligii ay guryaha gubayeen ayay dhaawac u gaysteen ilma yar,haweenay indha la’a iyo oday da’a ah.hadana xiligan la joogo bulshada goobta ku n ool in dhibaatooyin fara badan oo noocaas oo kale ah ay la kulmi karaan ayay walwal ka qabaan.
Dadkan fikirkooda dhiibtay oo hadalkooda sii wata ayaa yiri goobihii ay ka soo barakaceen inay ku laabtaan oo ay guryahooda dib u dhistaan hadii ay isku dayi lahaayeen in kooxda argagaxisada ee shane ay weerar iyo dhib u gaystaan maadaama ay ka baqayaan islamarkaana kooxdu ay gabad ku yihiin goobo lagu magacaabo ‘’haro chalanqo,maqa wanz,daraq wanz’’ xiligay doonaana ay doo weerari karaan.
Mudane daanye ayaa yiri maleesiyaadka aagaasi ka hawlgalo in lagu kala qoray goobaha isbaarooyinka iyo soodimaha oo ay inay shacabka difaacaan ay isku dayayaan,laakiin haweenka iyo caruurta markii ay xabad dhacdo maadama ay cabsanayaan in ladajiyo inay adagtahay ayuu sheegay.
Daanye balaay ayaa intaas raaciyay kooxdan argagaxisada ciidankooda inay ka hortagaan oo ay iska difaacaan in kasta oo ay iskudayeen hadana dhanka hubka in uu dhib ka haysto,hasa ahaatee in kasto oo ay ku wargaliyeen maamua dagmada dhibkooda ilaa iyo hada in aanan wax hub ah la siinin ayay sheegayaan.
Bulshada goobta ku nool ayaa yiri onag shane xiligii ay guryaha gubeen in ka badan 800 oo neef inay guryaha ku xaraysnaayeen oo ay ku dhax gubteen ayay sheegeen.
Xubnaha ay arinkan khusayso inay hoy iyo raashin ay siiyaan sidoo kalen ay ka ilaaliyaan weerarada ay kooxhan la beegsadaan ayay maamula dagmada ku wargaliyeen.
Gudoomiyaha Dhibaatdan qabalaha ay ka dhacday ee qabalaha bifine era, mudane warqiye makonin ayaa dhankiisa sheegay 8kun muwadiniin kabadan inay barakaceen ayuu cadeeyay,in caawimaad lala soo gaadho in kasto oo ay ku wargaliyeen gudoomiyaha dagmada ilaa iyo hada inaysan wax jawaab helin ayuu sheegay.
Mudane warqiye ayaa intaas ku daray ‘cadawga masaafo hal kilomitir ah ayay noojiraan,dawlada iskadaaye hube 10 xabo rasaas ah ayay nasiiyeen.xitaa in dalagii beeraha la awoodi waayo in la soo aruuriyo ayuu sheegay.’
Wargayska addis maalada ayaa abaaray gudoomiyaha dagmada warra jaarso ee gobolka waqooyiga shawaa ee deegaanka oromiya,in kasta oo maareeya la isku dayay in taleefan loo diro maadama uusan qabanin taleefanka wax jawaab ah lagama helin.
Total views : 7512481